Xisbiga V: Lacag dheeraad ah ha la siiyo xarumaha dumarka dhibaateysan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Claudio Bresciani / SCANPIX
Xisbiga V: Lacag dheeraad ah ha la siiyo xarumaha dumarka dhibaateysan
La daabacay tisdag 6 augusti 2013 kl 16.40
Xisbiga Bidixdu wuxuu doonayaa in 200 malyan oo karoon sannad walba lagu kaalmeeyo xarumaha gargaarka loogu fidiyo dumarka dhibaatooyinka kala soo kulma qoysaskooda. Sidaasna waxaa soo werisey wakaaladda wararka ee TT.
Waxaase siyaasadda dowladda ee ku wajahan xarumaha dumarka dhibaateysan dhaleeceyn u soo jeediyey xisbiga Bidixda oo ku tilmaamay in dowladdu ay hadal uun hayso ee aysan waxqabad la imaan marka laga hadlayo kaalmeynta xarumaha dumarka dhibaateysan. Isagoo tixraacaya xukumadii lagu riday rag qudha ka jaray dumar qaraabo, ayuu xisbigu hadda soo jeedinayaa hindise ah in xarumaha dumarka dhibaateysan loo qoddeeyo kaalmo asaasi ah oo gaareysa 200 malyan oo karoon.
Sannadkii 2007 ayey dowladdu dejisay qorshe waxqabad oo lagu la dagaalamayo ragga dumarka u xoogsheegta. Sannadkii 2009 ayey ahayd markii ay dowladdu ka kordhisay kaalmo dhaqaale oo la siiyo xarumaha dumarka dhibaateysan 19 malyan oo gaarsiisey 29 malyan oo karoon.